Plurro waxay Keenaysaa Mob-ga Lacagta ah ee Meheraddaada Tafaariiqda ah | Martech Zone
Waxaa jiray godad halis ah oo laga dhex helay warshadaha kooxda dhimista oo aan weli laga guuleysan. Cabashooyinka ka imanaya ganacsiyada isticmaalaya Groupon iyo LivingSocial waxay tilmaameen arrimo dhowr ah:
Qiimo dhimista loo baahan yahay waa mid aad u kacsan oo dhaawacaysa ganacsiyada.
Bixinta sicir-dhimista si dhakhso leh uma timaaddo, taas oo keeneysa arrimo daran oo lacag-bixin ah oo aasey meheradaha qaarkood.
Macaamiisha ay soo jiitaan waxay u joogaan kuwa gaarka ah oo keliya oo dib uma soo noqon doonaan.
Shirkadaha ayaa si xoog leh isku dayaya inay iibiyaan meherada markasta.
Plurro ayaa ku rogtay nambarka kooxda qiimo dhimista madaxiisa. Marka hore, waa macaamiisha kaxeeya mobilka lacag. Mar alla markii ay asxaabtaadu ku filan tahay inay is-qoraan si ay u aadaan goobta ama ilaha tafaariiqda, Plurro waxay la xiriirtaa meheradda nooca dhimis ay bixin karaan Kooxda Lacagta ee loo yaqaan 'Plurro Cash Mob' ayaa soo muuqaneysa waana inay muujiyaan tigidhadooda mobilada oo ay galaan qaddarka rasiidka si loo helo dhimista Tan waxaa xaqiijiyay milkiilaha ganacsiga.
Dhamaan tikidhada waxaa kudaray Plurro meheraduna waxay bixisaa lacag dhan 5% oo Plurro ah oo loogu talagalay ganacsiga. Waa xal weyn oo laga adkaadaa mid kasta oo ka mid ah arrimaha kor ku xusan. Ugu horreyn, ganacsigu wuu ka qaybqaadan karaa haddii ay rabaan oo dejiyaan sicir-dhimista lafteeda. Marka xigta, horay ayaa loo siiyaa mushaharka ka dibna waxay bixiyaan Plurro. Tan ugu muhiimsan, maadaama ay saaxiibo yihiin oo adeegsanaya nidaamka… waa wax badan oo ku saabsan goobta iyo wakhti fiican la qaadashada sida ku saabsan dhimista Ugu dambayntiina, sababta kaliya ee Plurro u soo wacayo ayaa ah iyada oo ay haddaba jiraan koox lacag ah oo sugaysa!
Waa kuwan muuqaalka guud ee Plurro:
Plurro waxay kuxirantahay Facebook waxayna kuu ogolaaneysaa dhowr siyaabood oo kaladuwan oo aad ugu talagasho uguna yeerto asxaabtaada kooxda lacagta kuugu xigta.
Plurro waxaa laga bilaabay Waqooyiga Virginia waxaana hadda laga bilaabay Indianapolis. Waanu tijaabineynaa - waa cudur daar weyn inaan dib u helno muuqaalka bulshada halkaan maxalli ahaan! Soo Degso Plurro on your iPhone - Android ayaa soo socota.
Tags: mobilka lacagdhimista kooxdakooxku noolaanshoplurro
Gubashada Sahaminta Macaamiisha